गल्ती गरेर किन भाग्दै छ बैंक अफ काठमाण्डौ ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
गल्ती गरेर किन भाग्दै छ बैंक अफ काठमाण्डौ ? – NEWS24 TV
बैकं तथा वितीय संस्थाहरुले आफ्नो गल्तीको सजाय सर्वसाधारणलाई कसरी दिन्छन् यस अघिको अंकमा हामीले देखायौ । बैंक अफ काठमाडौले ऋण लिदै नलिएकी कञ्चनपुरकी सुरेखा कार्कीलाई कालो सुचिमा राख्यो । त्यती मात्र होईन उन्का बुवा बाजेको नाम सहित सुरेखा ऋणी भएको भन्दै दैनिक पत्रिकामा पनि छाप्यो । यस्तो किन गरेको भनि बैंकलाई सोध्दा बैंक उल्लो सुरेखालाई हप्काईरहेको छ । घरि उन्लाई अदालतको आदेश ल्या भन्ने घरि तिमी नै सुरेखा हो भन्ने प्रमाण दे भन्ने बैंक अहिले भने सुरेखाको खोज गर्न लागेको छ । शुक्रवार बैंकका कर्मचारीले सुरेखालाई केन्द्रिय कार्यालय बोलायो । तर उन्लाई एक्लै मात्र भित्र आउन र केही कागजमा दस्तखत गर्न भनेपछि सुरेखा गईन्न् । कार्यालय भित्र पुगिसकेकी सुरेखा एक्लै कुरा नगर्ने भन्दै बाहीर आईन् । त्यसपछि उन्ले राष्ट्र बैंको केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दिने भनेपछि बैंकका कर्मचारीले यस्तो म्यासेज पठाए ।